Posted by ကို Tranquillus | အောက်တိုဘာ 19, 2020 | web ပေါ်မှာ
21 ၂၀၁၁ နို ၀ င်ဘာ ၂၁ သည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း၏အဓိကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုနှင့်ကျွန်ုပ်၏လေ့ကျင့်ရေးအကောင့်မှသင်၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများသည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဦး တည်ချက်၏တစ်ခုတည်းသောသခင်ဖြစ်သည်။
သင်၏ CPF လက်ကျန်ငွေကိုစစ်ဆေးပါ၊ လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ၊ သင်တန်းတက်ရန်မှတ်ပုံတင်ပါစသည်တို့။ သင်သိထားသင့်သည့်အဓိကအချက်များမှာ - သူတို့ကိုရှာပါ ချက်ချင်းပင်!
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု: သတိရဖို့ဘာ! ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် လူမှုရေးလုပ်ဆောင်မှု၏ အခြေခံအချက်များ
လွန်ခဲ့သောအဘယ်ကြောင့်ပြင်သစ် (ပြန်လည်) ရေးသားဖို့သင်ယူသင့်သလဲ
အောက်ပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုပြင်သစ်လိုကောင်းမွန်စွာရေးတတ်အောင်သင်ဘယ်လို (ပြန်လည်) သင်ပေးသလဲ။
မသန်စွမ်းမှု၊ မသန်စွမ်းမှု၊ မမှန်ကန်မှု- ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။